कम्युनिस्ट शासनमा खुलेआम चल्छन् घुस अड्डा, सेवाग्राही लुटिँदैNepalpana - Nepal's Digital Online
कम्युनिस्ट शासनमा खुलेआम चल्छन् घुस अड्डा, सेवाग्राही लुटिँदै
नेपालपाना मंसिर ४ २०७५
काठमाडौं । टेबलमा फाइलसँगै सयको नोट। महिला कर्मचारीले हतपत टेबलमूनी घुसारिन्। तुरुन्तै ३० रुपैयाँ फिर्ता दिइन्। सेवाग्राहीले हतपत गोजीमा हाले। ‘उता जानुस् अब,’ उत्तरतर्फ संकेत गर्दै कर्मचारीले भनिन्। त्यसपछि घोसेमुन्टो लगाई कतै नहेरी भनिन् ‘अर्को आउनुस्, अर्को।’
नयाँ मान्छे मुल गेटमा देख्नै हुन्न। विचौलियाहरु सलबलाउँछन्। कार्यालयभित्र पस्नै नपाइ सेवाग्राही तिनको फन्दामा पर्छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ ।
कोठा नम्बर ५। ढोकामा लेखिएको छ ‘कम्युटर कोठा’। त्यहाँ पुग्दा एकजना चस्मा लगाएमा कर्मचारी व्यस्त थिए। छेउछाउमा उभिएका थिए ३/४ जना सेवाग्राही। एकजना मोटो ज्यानको सेवाग्राहीले जिन्सको जोगीबाट सय÷पचासको नोट फुत्त निकाल्दै भने, ‘सर यो।।।।’ तर कोठामा अन्य मानिस देखेपछि कर्मचारीले पैसा थापेनन्। सेवाग्राहीले पैसा तुरुन्तै फेरि गोजीमा हाले। डराए जस्तो गरी यताउता हेरे अनि फटाफट बाहिरिए।
अप्ठ्यारो बस्नेतलाई मात्रै परेको छैन। दिपकबहादुर राई ३ महिनादेखि यही काममा खटिएका छन्। अझै काम सुन्य। लाइसेन्स नबनेका कारण उनले दुईवटा काम गुमाइसके। ‘पैसा दिने हो भने मेरो काम अहिले बन्छ, तर म किन पैसा दिऊँ रु ’ उनले आक्रोशित हुँदै भने, ‘के सबै काम बिचौलीया मार्फत नै गर्नुपर्ने हो ? यो देश विकास नभएको यही कारणले हो। जता पनि भ्रष्टाचार। पैसा नखुवाई वरको सिन्को पर सर्दैन, हैट।’
वितरण शाखाको झ्यालबाट एकजना रिसाउँदै बाहिरिए। उनी भन्दै थिए, ‘म्यासेजमा आयो भन्छ, यहाँ छैन। के ताल हो ? उता ट्राफिकले किचकिच गर्छ। यता लाइसेन्स एक वर्षमा नि आउदैन।’ उनी रिसाउँदै बाहिरिए। अर्का एकजना भन्दै थिए, ‘६ पटक आइसकेँ। वाक्क लागिसक्यो। कहिले आउँछ भनेर सोध्यो भने अन्दाजमै तीन महिनापछि आउनु भनिदिन्छन्। हैरान भइसकियो।’
बिचौलीया– के चाहियो हजुर ?
गेटमै भेटिए एक युवा। उनले आफ्नो नाम शम्भु बताए। ७ वर्षदेखि उनी कार्यालय परिसर चक्कर काटीरहेका छन्। मासिक एक लाख कमाइ हुने उनले सुनाए। उनका अनुसार बिचौलिया काम गर्ने कतिले घर बनाइसके। कतिले जग्गा जोडिसके। ‘मैले त के कमाएको हो र ? ’ नजिकैका साथीलाई देखाउँदै उनले भने, ‘उसले यहाँ काम गरेको १७ वर्ष भइसक्यो। काठमाडौंमा घर जग्गा जोडिसक्यो। मालामाल छ त्यसको।’ यसरी सम्पती जोड्ने बिचौलियाहरु थुप्रै रहेको उनले संकेत गरे।
विगत ४ वर्षदेखि त्यही घुमिरहेका अर्का विचौलिया अमिसको भने गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘छैन, कमाइ घट्यो नी अहिले त। पहिला–पहिलाको जस्तो कहाँ हुनु।’ उनको अवरोध सिभिलमा घुम्ने प्रहरी र नयाँ कर्मचारी रहेछन्। उनले भने, ‘सीभिलमा पुलिस घुम्छ नी। कर्मचारी पनि नयाँ–नयाँ आएका छन्। राम्रोसँग चिनजानै भएको छैन।’ कर्मचारीहरु धेरै लामो समय नटिक्ने ६/६ महिना फेरिरहने उनको अनुभव छ।
सँगै १६/१७ वर्षका अर्का किशोर कुरा सुनिरहेका थिए। उनले ती किशोरतर्फ हेर्दै भने, ‘यो मेरो भाइ हो। यसलाई पनि काम सिकाउन ल्याको।’ ती किशोरले केही बोलेनन्। दाइले जे जे गर्छ त्यो ध्यान दिएर नियाली रहेका थिए।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्रका कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार सिंह बाहिर छातामा बस्नेहरु सबै विचौलिया भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘बाहिर छातामा बस्ने सबै विचौलिया हुन्।’ उनीहरुलाई हटाउन पटकपटक प्रत्यत्न गरिएको उनले बताए। ‘जिल्ला प्रसाशन कार्यालय र महानगरपालिकामा पत्राचार गरि गुहार मागियो। तर कार्यान्वयन भएको छैन। उनले भने, ‘हामी बिचौलियालाई लखेटेर बस्ने कि सेवा दिने ?’ प्रहरी प्रसाशनले कडा नगरेसम्म बिचौलिया नहट्ने उनले बताए।
मंसिर ४, २०७५ मंगलवार ०८:१७:३५ बजे : प्रकाशित